साधारण क्यामेराबाट राम्रा फोटो खिच्न यसो गर्नुस् ? | mulkhabar.com
साधारण क्यामेराबाट राम्रा फोटो खिच्न यसो गर्नुस् ?
June 27, 2016 | 6:31 pm 184 Hits
महत्वपूर्ण अवसरलाई अविस्मरणीय बनाउने चाहना सबैको हुन्छ । सोही कारण कुनै पनि समारोह, घुमघाम, पिकनिकजस्ता कार्यक्रममा धेरैको ध्याउन्न फोटो खिच्नेमा नै हुन्छ । आजकल मोबाइल सेटमा नै जडान हुने क्यामेराले सबैलाई फोटोग्राफर पनि बनाइदिएको छ । अझ सेल्फी कल्चरले त छुट्टै फोटोग्राफरको आवश्यकता पनि नहुने भइसकेको छ । तर, हातमा क्यामेरा हुादैमा सबैले राम्रै तस्बिर लिन्छन् भन्ने हुादैन । तस्बिर राम्रो कैद गर्ने पनि एउटा कला हो । यो कलामा निपुण हुन साधारण क्यामेराले तस्बिर लिादा अपनाउनुपर्ने साधारण टिप्सहरूका विषयमा फोटो पत्रकार चन्द्रशेखर कार्कीको टिप्स यस्ता छन् :
लिने क्रममा क्यामेराको लेन्समा सीधै लाइट पार्नु हुँदैन ।
फोटो लिँदै गर्दा क्यामेरा सधैँ सीधा समात्नुपर्छ । त्यसलाई हल्लिन दिनु हुँदैन ।
कुनै पनि सब्जेक्टको तस्बिर लिँदा आफूले चाहेको जति सबै क्यामेरामा पार्ने कोसिस गर्नुपर्छ ।
फोटो सकेसम्म मध्यदिनमा लिनु राम्रो हुँदैन । मध्यदिनमा उज्यालो पनि आवश्यकताभन्दा बढी हुन्छ र छाया पनि
आवश्यकताभन्दा बढी हुन्छ । यसले गर्दा तस्बिर राम्रो नआउन सक्छ ।
आफूले चाहेको तस्बिर लिँदा सकेसम्म डिजिटल जुम प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
अहिले मनसुनको मौसम छ । त्यसैले तस्बिर लिने क्रममा क्यामेरालाई पानीबाट जोगाउनुपर्छ ।
एउटै सब्जेक्टलाई पनि फरक–फरक स्थानबाट एंगल परिवर्तन गरेर तस्बिर लिँदा नयाँ देखिन्छ । यसले तस्बिरमा फरकपन आउँछ र सुन्दर देखिन्छ ।
कुनै पनि व्यक्तिको तस्बिर लिँदै हुनुहुन्छ भने उसको ‘आई लेभल’सँग क्यामेरा मिलाउनुपर्छ ।
समूहको तस्बिर लिँदा पनि आई लेभललाई ख्याल राख्नुपर्छ । सकेसम्म एउटा वा दुइटा लाइन बनाएर तस्बिर लिँदा राम्रो देखिन्छ । धेरै लाइन गरेर अगाडि–पछाडि भयो भने मान्छे छेकिने तथा फोकस मिलाउन पनि समस्या हुन्छ ।
विषयवस्तुलाई बुझेर नजिक जाने कोसिस गर्नुपर्छ । तस्बिर लिने क्रममा सब्जेक्टलाई पनि सहज बन्ने वातावरण बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ ।
कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि तस्बिर लिनुपर्ने हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा समय परिस्थिति बुझेर, अनुमति लिएर तस्बिर लिनु राम्रो हुन्छ ।
अहिले मोबाइल सेल्फीको जमाना छ । सेल्फी खिच्दा हातबाट मोबाइल खस्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले एकदम केयर गरेर सेल्फी लिनु राम्रो हुन्छ । सकेसम्म सेल्फी स्टिक प्रयोग गर्नु धेरै राम्रो ।
फोटाग्राफरले तस्बिर लिनेक्रममा आफू कस्तो स्थानमा बसेको भन्ने ख्याल राख्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो स्थानमा बसेर फोटो खिच्ने क्रममा दुर्घटना पनि हुनसक्छ । केही समयअगाडि मात्रै चितवनमा सेल्फी लिने क्रममा ख्याल नराख्दा दुर्घटनामा परी ज्यानसमेत गुमाउनुपर्‍यो ।-चन्द्रशेखर कार्की
सदृश्य पिक्स, अनामनगर